Wararka Maanta: Sabti, Nov 3 , 2012-Xildhibaannada Baarlamaanka oo diiday qodobbo uu ka mid yahay inuu kala diri karo Madaxweynuhu Baarlamaanka Soomaaliya
Kulankii maanta uu shir-guddoominayay guddoomiyaha, Prof. Maxamed Cismaan Jawaari ayaa waxaa xaadiray 168 mudane, kuwaasoo ka dooday saddex qodob oo ay xidlhiaannadu diideen markii ay cod u qaadeen kaddib.
Qodobka ay sida aadka ah uga doodeen xildhibaannada baarlamaanka ayaa wuxuu ahaa qodobka dhigaya in madaxweynuhu uu kala diri karo baarlamaanka, sidoo kalena ay baarlamaanku iyagu is kala diri karaan, qodobkaasoo la sheegay inuusan ahayn mid caddeynaya sababta lagu kala dirayo baarlamaanka.
Sidoo kale, waxay xildhibaannadu si aad ah uga doodeen qodob kale oo dhigaya xilliga lagu soo dhisayo hay'adaha kala duwan ee dowladda, kaasoo la isku raacay in muddo lagu kordhiyo, iyadoo loo saaray guddi sixitaan kusoo sameeyaan saddexdii qodob ee xildhibaannadu ay diideen.
Dood dheer kaddib ayay xildhibaannada baarlamaanka waxay codka u qaadeen qodobbadii ay sida aadka ah uga doodeen maanta, iyadoo ugu dambeyn saddexdii qodob ee laga dooday diiday.
Guddoomiyaha baarlamaanka, Prof. Jawaari ayaa ku dhaawaqay natiijadii codeynta xildhibaannada baarlamaanka, waxaana natiijada ka mid ahaa in qodobka ku aaddan in baarlamaanka uu kala diri karo madaxweynaha diiday 162 mudane, saddex waa ka aamuseen, saddexda waa ogolaadeen.
Ugu dambeyn, waxaa la isku raacay inay sii socdaan ka doodda qodobbada xeerar hoosaadyada baarlamaanka Soomaaliya uu ku shaqeynayo, iyadoo fadhigan kiisa xiga ay xildhibaannadu isugu imaanayaan maalinta Isniinta ah ee soo socota.
11/3/2012 2:56 AM EST